कोरोना संक्रमणबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शाक्यको निधन — onlinedabali.com
कोरोना संक्रमणबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. शाक्यको निधन
डबली संवाददाता२०७७ मंसिर ११ गते
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमणबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. रवीन्द्रकुमार शाक्यको निधन भएको छ । कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएपछि शाक्यलाई नेपाल मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको लागि भर्ना गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य सुधारको लागि हर प्रयास गरिएको तर बचाउन नसकिएको अस्पतालले जनाएको छ । उपचारको क्रममा शाक्यको विहीबार विहान ४ बजेतिर निधन भएको थियो । उनी २०७० मा योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिए ।
चिसो बढेसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको मृत्यदर पनि बढेको छ । बुधबार २८ जना संक्रमितको ज्यान गएको थियो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार बुधबार थप २८ सहित नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ हजार ३ सय ८९ पुगेको थियो ।
त्यसैगरी बुधबार थप १ हजार ९४८ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो । ब यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या २ लाख २६ हजार २६ पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा ९ हजार २१० जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको मन्त्रालय जानकारी दिएको छ ।
पछिल्ला दिनमा संक्रमित भन्दा कोरोनामुक्त हुनेको संख्यामा बृद्धि भइरहेको छ । न‍ेपालमा बुधबारसम्म थप ३ हजार १४० जना संक्रमणमुक्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका थिए । बुधबारसम्म नेपालमा २ लाख ७ हजार ९९८ जनाले कोरोना जितेका छन् ।
त्यसैगरी बुधबार देशभर सक्रिय संक्रमित १६ हजार ६३९ जना रहेका छन् भने संक्रमण मुक्त हुने दर ९२ प्रतिशत पुगेको छ ।
चाड पर्व सकिएसँगै कोरोना परीक्षण पनि बढाइएको छ । बुधबारसम्म देशभर १६ लाख ९० हजार ५०९ जनालेको पीसीआर परीक्षण गरिएको थियो ।